Amandla e-Ithala: Igalelo ekufukuleni amakhono nomnotho - Bayede News
Amandla e-Ithala: Igalelo ekufukuleni amakhono nomnotho
Ziphansi izinsizwa: NaMakhosi ayaphatheka ekufeni kwezinduna
Ngalesi sikhathi kunesililo kuzwelonke ngokukhula kwesibalo sabangasebenzi kanye nokuswelakala kwamakhono, isikhungo i-Ithala Development Finance Corporation (IDFC) sethule uhlelo lokucija amakhono osomabhizini abasakhasayo KwaZulu-Natal. Lolu hlelo olwaziwa nge-Ithala DUT Business Support Initiative, liwumsebenzi wokubambisana nabakwaNgqondonkulu, iDurban University of Technology (DUT).
ISikhulu Esiphezulu se-Ithala Group, uPearl Bengu (osesithombeni) sithe uhlelo lugxile entsheni nakwabesifazane okumanje kulabo abangama-50 bokuqala abangama-26 abesifazane. Bazoqeqeshwa ekwenzeni uhlaka lokusebenza, uhlaka lwezezimali, ukuhlaziya amandla nobuthaka (SWOT) kanye nokuqonda indawo elawulwayo phakathi kokuningi okwenziwayo. Uthe iqoqo lesibili nalo lizohamba umgudu ofanayo ngasekupheleni kukaMbasa kulo nyaka.
“Ithala lakha imisebenzi futhi lisebenza ngokubambisana neDUT kulolu hlelo, sethemba sizokwazi ukwakha imisebenzi eminingi esifundazweni sinciphise nezinga lokungaqashwa okumanje limi emaphesentini angama-47,” kubeka owakwaBengu.
Enkulumweni yakhe uMphathiswa uRav Pilay i-Ithala elingaphansi kwakhe uthe osomabhizinisi abasafufusa nabamaphakathi (SMME) bangumgogodla osemqoka ohlelweni lokubuyisa umnotho KwaZulu-Natal kanye nasekulungiseni izinselelo ezalethwa wukhuvethe.
“AmaSMME akha imisebenzi izwe lonke futhi sifuna amaSMME ethu akwazi ukungena kuzo zonke izingxenye ezisemqoka zomnotho wethu ukuze akwazi ukufinyelela kule nhloso,” kusho uPillay enkulumeni ebeyethulwa ngomunye.
Ukwethulwa kohlelo lokuqeqesha kulandela ukusayinwa kwesivumelwano sokusebenzisana phakathi kweDUT ne-Ithala ngoMandulo ngonyaka odlule. Emklameni wokuqala wohlelo, amalungu angamashumi ama-50 amaSMME akhethwe kuso sonke isifundazwe, emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya. Laba bazoqala ukuqeqeshwa bathole isitifiketi saseDUT ekuphathweni kwamabhizinisi.
Ukwethulwa bekuthanyelwe ngobuxhakaxhaka ngabaningi ababambe iqhaza kubandakanya noSihlalo weBhodi Lase-Ithala, uRoshan Morar nePhini LikaMsizi Shansela laseDUT uSibusiso Moyo.
nguZakhele Nyuswa Mar 5, 2021